Home Wararka Dr. Beyle oo Beentiisii Joogtada Ahayd run ka Sheegay Ugu Dambeynta! Akhriso
Wasiirkii Maaliyada ee Somaliya muddo 5 sano ku dhow ayuu ahaa Cabdiraxman Ducle Beyle, waxaana ka masuul ahaa sida uu shaqeynayo dhaqaalaha dalka iyo isla jaanqaadka hannaank Maaliyadeed ee xaaladaha dunida iyo dalkeenna ayaa si degdeg ah isu badalayey, kadib markii ay u caddaatay in aanu sii ahaan doonin wasiirka Maaliyadda.
Dr. Beyle waligiis run kama sheegin shaqadiisa, ma qaban shaqo qaran wax wanaagsan uu ka dhaxlo waxaana marqaati cad kuu ah oo aan akhristow kugula doodayaa inaad keentid wax ku lid qodobadaan faashilkiisa aan ku soo gudbin doonno:
Intii uu wasiirka ka ahaa wasaaradda wax xisaabxer ah lama sameyn marka laga reebo sannadkii ugu horreeyey oo uu diyaariyey madaxyadiisa iyo madax xigeenadiisa wasiirkii ka horreeyey isaga. Dad badani marka maqlaan xisaab xer waxay u qaataan wax iska fudud. Waa mxay xisaab xer? Xisaab xer waa marka dakhliga ku soo galay iyo kharashka kaa baxay ay isku aaddan yihiin oo lacag waliba lagu bixiyey halkii loogu talagalay, wixii soo harayna ay buugaagta ka muuqdaan. Tusaale haddii miisaaniyaddau ahayd 2 Bilyan oo dollar, marka sannadka uu dhamaado waa in la soo caddeeyaa halka ay lacagtaas ku baxday iyo sifaha ay ku baxday inuu waafaqsan yahay sharciga u yaalla miisaniyadda. Laakiin Ilaa iyo hadda Beyle lama oga wixii soo galay 2017 ilaa 2021 iyo halka u uku bixiyey iyo inuu isaga wada qaatay.
Waxaa uu in muddo ah sheegayey in kaabiga loo joogo in Somaliya deynta laga cafiyo oo ay dowladdiisu, gaar ahaan wasaaradiisu dhameystirtay hal iyo laba shuruudihii ka soo haray wixii faraha badnaa ee ay dowladdii hore qabatay. Laakiin waxay ahayd been cad oo uu ogaa rabayna inuu xafiiska ku sii joogo.Ma jirto wax deyn ah oo la cafiyey.
Musuqmaasuq baahsan oo ay dowladdiisu, gaar ahaan wasaaradiisu magansatay oo uu rabo hadda inuu iska dhigo qof ka nadiif ah. Waxay MOL inbadan idiin soo gudbisay wax isadabamarinta ay shirko ku ahaayeen isaga iyo RW Xelligaas joogay ee Xasan Cali Kheyre.
Waxaa uu caddeeyey run in muddo ah qarsooneyd oo ahayd inuu wasaaradda uu u joogay inuu dhaqaale ka urursado oo uusan rabin inuu noqdo xildhibaan golaha Shacbiga ah mar haddaan wasaarad uu dhici karo, dhaqaalana leh loo ballan qaadeyn.
Beyle waxaa guryo waaweyn ka dhistay magaalooyinka Borama, Hargeysa iyo Washingto DC. Waxaana guriga weyn ee dabaq ah ee Hargeysa loo bixiyey Xamar-diid si loo xanuujiyo dadkii Canshuurtooda lagu dhisay ee reer Muqdisho.
Xog ay ogaatay MOL ayaa waxay ahayd in wasiir Beyle uu bishiiba bixi jiray laba ilaa seddex jeer safar dalka dibadiisa ah , iyadoo safar kastaa uu sii qaadan jiray $50,000 taas oo sahay safar loogu yeero.
Xataa haddii uu baxo laba safara oo kaliya waxaa ay sahay safarkiisu noqoneysaa Hal milyan iyo laba boqol oo kun oo dollar waana khasaaraha uu qarankan u geystay iyo iyadoo ah mid ka mid ah sababaha aan xisaabxer barlamanka loo horkeenin, waxaana la kala eryey guddigii maaliyada ee Barlamanka oo sheegay inay $42 milyan inay maqan tahay.
Haddaba Wasiir, Xil. Dr. Cabdiraxman Ducaale Beyle waa in loo maxkamadeeyo dhibaatooyinki maalaiyadeed ee uu geystay muddadii 5-ta sano ahayd oo saameynta weyn ku yeeshay siyaasada iyo nolosha dadka Somaliyeed.
Ma aha in dhibaatooyinka ay dad badani geysteen ay taariikh iska noqdaan ee waa in la abuuraa hannaan laguala xisaabtamo cid kasta oo ku takri fashay:
Awoodaha ciidan ee uu sharcigu siiyey.
Awoodaha dhaqaale ee uu sharciga siiyey.
Awoodaha maamul ee uu sharcigu siiyey.
Haddii kale waxay noqonayaan taariikh iyo wax iska dhacay, ku kasta oo damiir laawe ah sida Beyle, Farmajo, Fahad iyo Xasan kheyre waa uu isa soo mutaxayaa si uu mar kale halkii iyo ka sii daran uga miiso dhibaateynta umaaddaan dhibban. Haddaba waxaad maqleysaa Xasan Kheyre iyo Farmajo ayaa sharraxan inay dalkaan madaxweynayaal ka noqdaan, waana ihaano iyo gef weyn oo dadka Somaloiyeed laga galayo.
Previous article[Akhriso] Magacyadda Sagaalka Xildhibaan ee maanta lagu doortay Muqdisho
Next articleDagaallo dib uga bilowday Waqooyiga Itoobiya